တရားခံ COVID ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်မယ့် သက်သေခံများ - YTV
Home » Blogs » တရားခံ COVID ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်မယ့် သက်သေခံများ
Blogs September 9, 2020 6:52 am
coronavirus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ COVID-19 ရောဂါဟာ မိမိမှာ ကူးစက်ခံလိုက်ရပြီလား ဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ...အချို့လူတွေက ရောဂါကူးစက်ခံရပေမယ့်လည်း ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သတိမပြုမိဘဲ အခြားသူတွေဆီကို ဆင့်ပွားကူးစက်ပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ ကွင်းဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့် တရားခံကိုဗစ်ရောဂါကို ခြေရာခံနိုင်မယ့် ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ လေ့လာထားကြရအောင်…
ဖျားနာခြင်း ၉၉% ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ၇၀% ၊ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း - ၅၉% ၊ အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ဆုံးမှု - ၄၀% ၊ ကိုယ်ခန္ဓာနာကျင်မှု: ၃၅% ၊ အသက်ရှုကျပ်ခြင်း - ၃၁% ၊ ချွဲ ၊ သလိပ် နဲ့ နှာစေးခြင်း ၂၇% ဖြစ်ပွားကြပါတယ်. ဒီရောဂါလက္ခဏာများဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးနောက် ၂ မှ ၁၄ ရက်အကြာမှာ ပြသလေ့ရှိပါတယ်…..
ဒါ့အပြင် အခြားလက္ခဏာများဖြစ်တဲ့ လည်ချောင်းနာခြင်း ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ တခါတရံ ချမ်းတုန်ခြင်း ၊ အနံ့ (သို့မဟုတ်) အရသာဆုံးရှုံးခြင်း ၊ နှာပိတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) နှာရည်ယိုခြင်း ၊ ပျို့ခြင်း (သို့မဟုတ်) အော့အန်ခြင်း ဝမ်းလျှောခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာများလည်း ခံစားရတတ်ပါတယ်….
ဒီလိုရောဂါလက္ခဏာတွေအပြင် အရေးပေါ်ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ အသက်ရှူခက်ခဲခြင်း ၊ ရင်ဘတ်နာကျင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်းကြပ်နေခြင်း ၊ နှုတ်ခမ်းပြာခြင်းများ ခံစားလာရတယ်ဆိုရင်တော့ တတ်နိုင်သလောက် အမြန်ဆုံးဆေးကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်. ဒါကြောင့် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးရုံသို့ချက်ချင်းဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားပါ. အကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာလည်း မိမိကိုယ်ကို Covid -19 ရောဂါခံစားနေရတယ်လို့ သံသယရှိကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးရပါမယ်. အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူ ၊ ဆီးချိုရောဂါ ၊ နှလုံးရောဂါများနဲ့ အခြားရောဂါတစ်ခုခုရှိပါက ရောဂါလက္ခဏာများဟာ ပိုမိုပြင်းထန်တတ်ပါတယ်…..
အခုလို Covid-19 ရောဂါရှိမရှိ ကိုယ်တိုင်သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာရပ်များကို မျှဝေပေးရခြင်းဟာ ရောဂါကိုစောစီးစွာ သိရှိကုသနိုင်ပြီး မိမိက အနိုင်ယူနိုင်ဖို့နဲ့ မိသားစုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကို ကွင်းဆက် ကူးစက်ခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ မိမိကိုယ်ကို သံသယရှိကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်….
ကိုဗစ်နိုင်တင်းရောဂါ မကူးဆက်နိုင်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့နဲ့ ကူးစက်ခံရမယ်ဆိုရင်တောင် လက္ခဏာတွေကို ကိုယ်တိုင်ခြေရာခံနိုင်ပြီး စောလျှင်စွာကုသမှုခံယူကာ ပြန်လည်ကျန်းမာကြစေဖို့ ဆုမွန်ချွေလိုက်ပါရစေ…